Faahfaahin: Waa sidee xaaladda koofurta Mudug saaka? | KEYDMEDIA ONLINE
Faahfaahin: Waa sidee xaaladda koofurta Mudug saaka?
Xaaladda Bacaadweyn ayaa degan kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo sababaay dagaallo xooggan oo shalay ka dhacay koofurta Gobolka Mudug.
BACAADWEYN, Soomaaliya - Xaaladda degaannada dhaca Koofurta Gobolka Mudug ayaa saaka degan kadib markii ay shalay ciidamadda Dowladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug oo is kaashanaya ay Al-Shabaab ka faramaroojiyeen Bacaadweyn iyo tuulooyinka hoos yimada.
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay culeys xooggan soo saareen Galmudug lixdii bilood ee la soo dhaafay, gaar ahaan magaalooyinka Wisil iyo Bacaadweyn, wuxuuna xusay in haadda si buuxda ay gacan ku heynta degaannaas ula wareegeen Ciidamada Galmudug.
Dhowr degaan oo ay ka mid ah Sabeenno gawrac iyo Qeycad, ayay dagaallo ka dhaceen galinkii danbe ee shalay, hayeeshee saaka wax dagaalka lagama soo soo sheegin degaanka.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dib ula wareegeen Bacaadweyn, waxaase wax kama jiraaan ku tilmaamay qaar ka mid ah saraakiisha Galmudug oo la hadlay Keydmedia Online.
Fiqi, wuxuu sheegay in howlgalkaan lagu xoreynayo degaannada Camaara, Caad iyo Xarardheere, kuwaas oo in muddo ah gacanta ugu jira Al-Shabaab, isla-markaaan guud ahaa labada gobol uu ka billaawday howlgal isku xiran.
Tan iyo markii uu xaafiiskaa yimid Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, ma jiro howlgal ballaaran oo maamulkiisa ku qaaday Al-Shabaab, waxaana bilihii la soo dhaafay si daran looga dayrinayay amniga Mudug iyo Galgaduud.